के तपाईँको बिहान ढिलो उठ्ने बानी छ ? मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ला ! « Lokpath
काठमाडौं । आयुर्वेददेखि चिकित्सा विज्ञानसम्म हरेक तहमा बिहान सबेरै उठ्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक रहेको बताइन्छ । हामीले बाँच्ने तरिका, के खाने, सुत्दा र उठ्दा यी सबैले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्छ।
बिहान सबेरै उठ्ने बानीले तपाईलाई धेरै स्वास्थ्य लाभ दिन सक्छ। चिकित्सा विज्ञानका विज्ञहरू यस बानीलाई शारीरिक र मानसिक दुवै स्वास्थ्यका लागि विशेष फाइदाजनक मान्छन्। तर, अहिलेको अव्यवस्थित जीवनशैलीले मानिसको सुत्ने र उठ्ने समयलाई निकै असर गरेको छ ।
राति ढिलो सुत्ने र बिहान ढिलो उठ्ने बानी हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मात्र होइन, यसले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि धेरै नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
आयुर्वेदको सिद्धान्त अनुसार बिहान घाम उदाउनुअघि नै उठ्नुपर्छ भने चिकित्सा विज्ञानले बिहान ६ बजेसम्म उठ्ने र हिँड्ने व्यायाम गर्ने दिनचर्या धेरै फाइदाजनक हुने बताएको छ । शरीर र दिमाग दुवै स्वस्थ राख्न बिहान सबेरै उठ्ने बानी बसाल्नुहोस्, यसले तपाईको स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुर्‍याउछ । आउनुहोस् बिहान सबेरै उठ्नुको केही फाइदाहरूका बारेमा चर्चा गरौँ ।
मानसिक स्वास्थ्यको लागि लाभदायक :
अध्ययनहरूका अनुसार चाँडै उठ्ने बानीले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई कायम राख्न धेरै सहयोगी हुन सक्छ। चाँडै उठ्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको यसले तनावको स्तर कम राख्छ। जब तपाईं चाँडै उठ्नुहुन्छ, दिनचर्याले सकारात्मकता फैलाउँछ। अनुसन्धानका अनुसार बिहान सबेरै उठ्ने मानिसहरूमा ढिलो उठ्नेहरूको तुलनामा तनाव(डिप्रेसन जस्ता समस्याहरूको जोखिम कम हुन्छ।
व्यायामको लागि समय :
बिहान सबेरै उठ्ने बानीले तपाईंलाई योगा-व्यायामको लागि समय निकाल्न मद्दत गर्छ। ढिलो उठ्नेहरूलाई व्यायाम गर्न अक्सर गाह्रो हुन्छ। व्यायाम नगर्ने बानीले तपाईको शारीरिक निष्क्रियता बढाउँछ, जसका कारण धेरै रोगहरु लाग्ने खतरा रहन्छ । विज्ञहरूका अनुसार बिहान खुला हावामा व्यायाम गर्नाले शारीरिक र मानसिक दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।
निद्राको गुणस्तर सुधार :
चाँडै उठ्ने मानिसहरूले राती चाँडै सुत्ने समय व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यसले तपाईको दिनचर्यामा मात्र सुधार गर्दैन, गुणस्तर निद्राका लागि पनि सहयोगी मानिन्छ। शारीरिक र मानसिक दुवै स्वास्थ्य कायम राख्नको लागि राम्रो निद्रा आवश्यक मानिन्छ।
यदि तपाईको ढिलो उठ्ने बानी छ र अब चाँडो उठ्न चाहनुहुन्छ भने बिस्तारै छिट्टै उठ्न सुरु गर्नुहोस्। हरेक दिन १०-१५ मिनेट पहिले उठ्ने बानी बसाल्नुहोस्। बिहान सबेरै उठ्नका लागि राति चाँडै सुत्नु र हल्का खाना खानु जरुरी मानिन्छ । दिनचर्यामा भएको यो सकारात्मक परिवर्तनले तपाईलाई धेरै तरिकामा फाइदा पुर्याउन सक्छ।
नोट: यो लेख चिकित्सा प्रतिवेदन र स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको सुझावको आधार मा तयार गरिएको हो।
प्रकाशित मिति: २०७९,बैशाख,१९,सोमवार १४:५४